Chii chinonzi Polymyalgia Rheumatism? [Zvese zvaunoda kuziva nezve Rheumatic PMR]
12 / 06 / 2019 /0 Comments/i rheumatism/av kundikuvadza
Chii Chaunofanira Kuziva NezvePolymyalgia Rheumatism (PMR)
Polymyalgia rheumatism chirwere chekushungurudzika chine chekuita nehuremu.
Iko kusagadzikana kunoratidzwa ne, pakati pezvimwe zvinhu, kurwadziwa kwakanyanya uye kurwadziwa mumapfudzi, chiuno nemutsipa - pamwe nehukama hwemangwanani. Kurwadziwa uye kuomarara zvinowanzove zvakaipa pamangwanani.
Hapana goridhe mumuromo imomo. Asi grey.
-Kumadhipatimendi edu akasiyana-siyana kuVondtklinikkene muOslo (Lambertseter) uye Viken (Eidsvoll Inzwi og Råholt), varapi vedu vane hunyanzvi hwakasiyana hwepamusoro mukuongorora, kurapwa uye kudzoreredza kudzidziswa kwemyalgias kwenguva refu uye kurwadziwa kwemhasuru. Dzvanya pane zvinongedzo kana pano kuti uverenge zvakawanda nezvemadhipatimendi edu.
Zviratidzo zvePlassmyalgia Rheumatism inosanganisira:
Kunzwa kwakawanda kwekushaya simba
Huru nyoro uye kupera simba
Kurwadziwa uye hypersensitivity mumapfudzi, chiuno uye mutsipa
Mazano ePolymyalgia Rheumatism
Polymyalgia rheumatica chirwere chinowanzoonekwa nehupamhi hwekushungurudzika kwemhasuru kumusana, asiwo muzasi uye pelvis. Apo varwere vedu vane PMR vanokumbira mazano pamusoro pezviyero-yega, isu tinowanzova nekutarisa kwakasiyana pakuzorora. acupressure bonde uye kushandiswa kwe masaja mabhora (zvinongedzo zvakavhurika mubrowser nyowani) nekushandisa kwakakodzera kunogona kukubatsira kuderedza kuwandisa mumhasuru uye kuve nekuzorodza.
Polymyalgia Rheumatism uye Rheumatic Arthritis
Pakutanga, zvaifungidzirwa kuti polymyalgia rheumatism yaive chimiro chechirwere chechipfuva pakati pevanhu vakura. Izvo zvakashata - sezvo zviri zviviri zvakasiyana zvakasiyana kuongororwa.
Musiyano wakakosha ndewekuti PMR haitungamire kukuparadzwa kwetiketeti nenzvimbo dzakabatana - kusiyana nerheumatoid arthritis. Iko kuongororwa zvakare hakuite, kazhinji, hakubate maoko, mawoko, mabvi netsoka. Mamiriro acho zvakare haagare - asi anogona kuenderera kusvika kumakore manomwe.
Ndiani Anotapurwa naPolymyalgia Revmatika?
Polymyalgia rheumatism ndiyo inonyanya kurapa yekurapa rheumatic chirwere chinobata avo vanopfuura makore makumi mashanu ekuzvarwa. Njodzi yekuvandudza chirwere ichi inowedzera nezera - uye avhareji zera revaya vanobatwa ingangoita makore makumi manomwe neshanu (1).
Vakadzi vane mukana wechipiri kusvika katatu wepamusoro wekuvandudza kuongororwa. Mune mamwe mazwi, zvinowanzoitika kuti zvinobata vakadzi vakura.
Polymyalgia Rheumatism Inokupa Sei Joint Marwadzo?
Kuongororwa kweMRI kucharatidza mufananidzo wakadzama wezviri kuitika mukati uye zvakapoteredza majoini ako. Muna PMR, iwe uchaona kuzvimba mu synovial membrane - iyo inowanikwa mune mucous sacs, majoini uye tendon. Kuwedzera kwemvura uye kusagadzikana kwekuita kunopa hwaro hwemarwadzo.
Chikonzero chaicho chekuzvimba nekuda kwePMR haisati yanyatsonzwisiswa. Tsvagiridzo inoratidza kuti genetics, epigenetics, kutapukira (mavhairasi uye mabhakitiriya) anogona kuita basa repakati nei munhu achitanga kuongororwa (2).
Polymyalgia Rheumatism uye Kuzvimba
PMR nokudaro inopa kuzvimba kwakanyanya kupfuura zvamazuva ese.Marudzi ekuzvimba anowanzo sangana nepolymyalgia rheumatica ibursitis (kuzvimba kwemucous membranes), synovitis (arthritis) uye tenosynovitis (kuzvimba kwekunze kwetambo - tendon).
Polymyalgia rheumatism inopa kazhinji kuitika kwe bursitis mumapfudzi uye chiuno. Bursitis saka iko kuzvimba kweiyo mucous sac - iyo anatomically fluid-izere chimiro iyo inovimbisa kufamba kwakatsetseka pakati pemabhonzo uye padyo zvinyoro zvinyoro. Mukuzvimba, izvi zvinozadzwa nehumwe hunyoro hunokonzera kurwadziwa.
Majoini kumeso uye majoini ejoini anogona kukanganiswa neiyo synovitis. Izvi zvinoreva kuti synovial membrane inova nemoto uye tinowana kuumbwa kwemvura mukati meiyo membrane - iyo inokonzeresa marwadzo akabatana, kupisa kupisa uye ganda rakatsvuka.
Kana iyo yekunze ye membrane yakatenderedza tendon ichipisa, iyi inonzi tenosynovitis. Izvi zvinowanzoitika pakati peavo vane PMR - uye imwe yeshanduro dzinowanzozivikanwa ndeye Dequervain's Tenosynovitis yemaoko.
Polymyalgia Rheumatism uye Exercise
Kuwana maekisesaizi akakodzera uye kudzidziswa kwako PMR zvinogona kuoma. Asi zvakakosha kuti urambe uchifamba uchifambisa kukurudzira kuyerera kweropa uye kupodza mitezo inorwadza uye tsandanyama.
Muvhidhiyo iri pazasi iwe uchaona chirongwa chekudzidzisa kune avo vane polymyalgia rheumatism yakagadziriswa na chiropractor uye kugadzirisa mushonga Alexander Andorff. Iyi ipurogiramu yakakamurwa kuva 3 - mutsipa, pfudzi uye mahudyu, sezvinowanzoita nzvimbo idzi dzinonyanya kubatwa nePMR.
Inzwa wakasununguka kunyorera kune yedu YouTube nzira yemahara (tinya pano) kune mazano epamhepo ekurovedza muviri, zvirongwa zvekurovedza muviri uye ruzivo nezvehutano. Kugamuchirwa kumhuri iwe unofanirwa kuve!
Yakakurudzirwa Kuzvibata-yega kurwisa Polymyalgia Rheumatism
Nekuda kwekuti kuongororwa kwakanyatso kubatanidzwa nekuwedzera tension uye kurwadziwa kumusoro kumashure, pamwe nemapendekete, asiwo muchiuno uye muhudyu, tinokurudzira kuzvidzora matanho anogona kuderedza marwadzo emhasuru. acupressure bonde (iyo link inovhura mufafitera idzva) chiyero icho icho vazhinji vanonzwa chinovapa kuzorora uye kurerukirwa pamhasuru dzakasimba. Meti inewo chikamu chayo chegotsi chinoita kuti zvive nyore kushanda kune kudhonzwa kwemhasuru mumutsipa. Imwe nhanho yakanaka ingave yekuumburuka bhora remassage - kunyanya kune misumbu mukati memafudzi epafudzi uye mukuchinja kwemutsipa.
(Mumufananidzo unoona imwe acupressure bonde mukushandisa. Dzvanya pamufananidzo kana link pano kuti uverenge zvakawanda nezve izvo zvinodaidzwawo trigger point mat.)
Zvimwe Zvinokurudzirwa Kuzvibatsira KweRheumatic uye Chronic Pain
Arnica kirimu kana kupisa conditioner (vamwe varwere vane PMR vanofunga kuti arnica cream kana balm inogona kunyaradza)
Ko Polymyalgia Rheumatism Yangu icharamba ichikanganisa pamakore here?
Iyo PMR inogona chaizvo kuenda yega. Izvi zvinoreva kuti mamiriro acho haasi echigarire, asi kuti anogara kwenguva refu. Marwadzo uye zviratidzo zvinokonzerwa nePMR zvinowanzokosha uye zvinowanzoda kurapwa. PMR inowanzogara kwemakore maviri, asi inogonawo kuramba inosvika makore manomwe. Nehurombo, zvinokwanisika zvakare kukanganiswa nemamiriro acho zvakare - kunyangwe makore akati wandei mushure mekunge wapedzisira kuva nawo.
Kurapa kwePolymyalgia Rheumatism
Kurapa kwacho kunosanganisira mishonga iri vaviri kuti isunungure kuzvimba, asi zvakare yekurapa kwepanyama kudzoreredza kurwadziwa mumhasuru uye majoini. Kurapa kwezvinodhaka kunosanganisira corticosteroids - senge cortisone mapiritsi. Nzira dzakajairika dzekurapa kwemuviri ndeye musculoskeletal laser therapy, masaja uye kubatanidza majoints - semuenzaniso na physiotherapist kana chiropractor. Varwere vazhinji vanoshandisawo maitiro ekuzvidzivirira uye kuzvirapa (sezvakaratidzwa pamusoro). Semuenzaniso, compression inotsigira uye inokonzeresa point balls.
Polymyalgia Rheumatism uye Glandular Arthritis
PMR inowedzera zvakanyanya njodzi yekukudziridza hofori seli arthritis - inozivikanwa se temporal arthritis. Ichi chiitiko chine njodzi chinogona kukonzera matambudziko akakomba nenzira yekurasikirwa kwekuona uye njodzi yakanyanya yesitiroko. Chirwere ichi chinokonzera kuzvimba mutsinga dzeropa dzinoenda mumusoro nemumaziso. Pakati pe9 ne20 muzana yeavo vane PMR vanokura giant cell arthritis - inoda kurapwa nemishonga.
Polymyalgia Rheumatism Support Mapoka
Goverana Inzwa wakasununguka Kutsigira avo vane Rheumatism
Isu tinokumbira iwe nemutsa kuti ugoverane chinyorwa ichi munhau dzezvemagariro kana kuburikidza ne blog yako(ndokumbira kubatanidza zvakananga kuchinyorwa). Isuwo tinofara kuchinjana kuchinjanisa kuchinjanisa nemawebsite akakodzera. Kunzwisisa, ruzivo rwevose uye kuwedzera kutarisisa ndiwo matanho ekutanga kune hupenyu hwezuva nezuva hwevaya vane chirwere chisingaperi chekurwadziwa.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/polymyalgia-revmatika_1.jpg?media=1648573622 368 700 kundikuvadza https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 kundikuvadza2019-06-12 21:41:222022-03-18 14:52:14Chii Chaunofanira Kuziva NezvePolymyalgia Rheumatism
Fibromyalgia uye Mimba Fibromyalgia inogona kukonzera kusimuka kwekutapukira muuropi